अब पुरानाे विद्युत प्राधिकरण सकिँदै छ - UrjaKhabar अब पुरानाे विद्युत प्राधिकरण सकिँदै छ - UrjaKhabar
अब पुरानाे विद्युत प्राधिकरण सकिँदै छ
विस्तारै विस्तारै पुरानो नेपाल विद्युत प्राधिकरण सकिँदै छ । यो यस अर्थमा भनिएको हो कि, उत्पादन्, प्रशारण, इन्जिनिरियङ र वितरण सबै अलगअलग हुँदै छ ।
पुरानो प्राधिकरण, अविश्वास गरिएको निजी क्षेत्र र भारतको सहयोगमा अहिले जुनकीरीको उज्यालो दिएका छौं । जम्मा करिब ११ सय मेगावाट, यति सानो व्यस्थापन हुँदा पनि हामी खुशी छौं । जनता दंग छन् ।
२०७६ साल बैशाख ६ गतेको प्राधिकरणको एउटा सूचनाले ५ हजार २ सय मेगावाटको सीमा सकिएको जानकारी दिएको छ । नदी प्रवाहीको, अर्धजलाशय हजार मेगावाटको विद्तयुत खरिद सम्झाैता (पिपिए) भयाे । पाइप लाइनमा दुवै थरी गरी ५ हजार ५ सय मेगावाट छन् । यी सबै कम्पनी मोडेलका कुरा हुन् । चाहे प्राधिकरण, निजी वा विदेशी जुनसुकै हुन्
जलाशय र ठूला आयोजना बनाउनुपर्ने प्राधिकरण र सरकार विदेशीको खेलमा रमाइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले कम्पनी जन्माएर अायाेजना निर्माणकाे बाटाे सजिलाे देखेकाे छ । सबै अलग्गै कम्पनीमा जादैछन् । प्राधिकरणको भूमिका किन शून्य हुँदैछ ? अायाेजना बने भैगो नबने भारत छँदैछ । यसकाे भू-राजनीतिक र अार्थिक (Geo-Politics & Economics) भयावह हुँदै छ ।
प्रसारणको अलग्गै ग्रिड विकास कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी अनि प्रदेशअनुसार विद्युत वितरण कम्पनी ढिलो चाडो भइहाल्छन् । त्यसपछि बिजुलीको मूल्य के हुने ? अनि हाम्रो भविष्य के हुने ? यो भयो हामी कता जादै छौ ? बुझिने भाषामा एउटा पिक्चर देखाइएको मात्र हो । विषय र मुद्दा धेरै छन् ।
यहाँ हामी भन्नाले विद्युत क्षेत्र हाक्ने, कर्मचारी वर्ग कस्तो अवस्थामा छौं ? अहिले के गर्दैछौं ? हाम्रो दायित्व के हो ? कर्मचारीहरूको समाजलाई हाँक्ने ( ड्राइभ गर्ने) संगठनको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? केही विवेचना गरौं ।
अधिकृत, सहायकस्तर र ज्यालादारीको रूपमा आर्थीक, मनोवैज्ञानिक र सामजिकरूपमै विभेद छ । व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । हामी अधिकांश भुक्त भोगी छौं । कतिले भोगेर त हामी कतिले बुझेर । सहायकस्तर र ज्यालादारीको रगत पसिना र नङ्ग्राको उचित न्याय दिनुछ ।
केही वर्ष अघिसम्म समानता र प्रगतिशील पक्षधर तीन समूहमा विभाजित थियौं । एउटा धार रामेस्वर पौडेल, अर्को धार खगेन्द्र शाही र तेस्राे धारको नेतृत्व मैले गरेका थिएँ । लाग्थ्यो यो तीनै धार सायदै कहिल्यै एउटै बन्ला ! समय र परिस्थितिले हामीलाई एकै ठाउमा मात्रै ल्याएन । माथि उल्लेखित हामी जाने बाटो र हाम्रो भविष्यको रेखा कोर्ने जिम्मा समेत हाम्रो काधमा आएको छ ।
व्यक्तिगत इच्क्षा र कुन्ठा छाडौं । प्राधिकरण व्यवस्थापन र यसका नेतृत्व कुलमान सरलाई कमजोर पारेर दीर्घकालमा घाटा हुने भनेको देश र संस्थालाई नै हो । कमजोर व्यवस्थापनलाई बोकेर हाम्रो सपना र योजना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले शक्तिशाली व्यववस्थापन्, शसक्त युनियन र सुन्दर भविष्य हाम्रो चाहना हो ।
आगामी बैशाख १९ गते प्राधिकरणमा सिबिए निर्वाचन हुँदैछ । यो चुनावले बाहिरी दुनियाँलाई ठूलो अर्थ नराखे पनि सारमा हाम्रो सुन्दर भविष्य र सुन्दर कर्मचारी समाज निर्माणको दायित्व पूरा गर्न ठूलाे महत्त्व राख्नेछ । फेरि हामी सबै परिवर्तनकारी, प्रगतिशील र सचेत कर्मचारीहरू हाम्रो सपना र भविष्य आँफै साकार पार्न एक पल्ट कुनै पनि खाले भ्रममा नपरी एकै ठाउमा उभिनैपर्ने भूमिकाको सङ्घारमा छौं ।